Safal Khabar - शोकमा डुबेको आरुबोटे : कोही यतिसम्म क्रुर हुन सक्छ ?
शोकमा डुबेको आरुबोटे : कोही यतिसम्म क्रुर हुन सक्छ ?
मङ्गलबार, ०७ जेठ २०७६, १३ : ०४
पाँचथर । पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका ३ आरुबोटेमा गएराति दुई परिवारको विभत्स हत्या भएको घटनास्थल हेर्नै नसकिने थियो ।
यति विभत्स तरिकाले ९ जनाको हत्या गरिएको थियो कि, अनुहारभरि धारिलो हतियारको छियैछिया थियो । मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमरराज माखिमका अनुसार घटनास्थलमा रगतको खोलो बगेको थियो, कसैको अनुहार चिनिने अवस्था थिएन । कुनै शव घरभित्र थियो, कुनै बाहिर थियो ।
घटनास्थल हेर्दा लाग्थ्यो, के मानिस यतिसम्म क्रुर पनि हुन सक्छ ? मान्छेको अनुहारलाई छियाछिया पार्न सक्छ ? त्यसमा पनि नौ/नौ जनालाई ! मकुण्डोधारी समूहले दुई परिवारका सदस्यलाई धारिलो हतियारले छ्याकछ्याक पारेर हत्या गरेको थियो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष माखिमका अनुसार ससुुरा र ज्वाइँको परिवारको हत्या भएको हो । उनका अनुसार घटनास्थल ससुरा र ज्वाइँको घर माथि र तल छ । स्थानीय धनराज शेर्मा र उनका ससुरा बमबहादुर फियाकको परिवारका ९ जनाको हत्या भएपछि आरुबोटे गाउँ पूरा शोकमा डुबेको छ । स्थानीय भावविह्वल भएका छन् ।
घटना कसले र किन गरेको हो प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ । स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता अर्चना गुरुङका अनुसार धनराजको परिवारका ५ जनाको हत्या भएको बिहान गाउँलेले थाहा पाएका थिए। यसैगरी बमबहादुरको परिवारका चारजनाको हत्या भएको छ ।
हत्या गरिएकामा ७४ वर्षीय बमबहादुर फियाक, उनकी श्रीमती, २६ वर्षीया मनकुमारी फियाक, ३६ वर्षीया जस्मिता फियाक, ४१ वर्षीय धनराज शेर्मा, ८ वर्षीया मुना शेर्मा, १२ वर्षीया आशिका खजुमलगायत छन् । १२ वर्षीया सीता खजुम भने भागेर बाँचेकी छन् । भागेर बाँच्न सफल सीता खाजुमका अनुसार कपडाले अनुहार छोपेर नचिनिने गरी आएको व्यक्तिले सबैलाई धारिलो हतियार प्रहार गरेका थिए ।
गाउँपालिका अध्यक्ष माकिमका अनुसार घटनास्थल पाँचथरको जिल्ला सदरकुमामबाट ५० किलोमिटरभन्दा बढीको दुरीमा छ । प्रहरीले घटनास्थल सिल गरेको छ । फोटो खिच्न दिइएको छैन । तालिमप्राप्त कुकुरसहितको प्रहरी टोली परिचालन भएको छ । घटनाको जानकारी पाएलगतै अनुसन्धानका लागि संघीय प्रहरी कार्यालय, धरानका एसएसपी शरद खत्रीको नेतृत्वमा तालिमप्राप्त कुकुरसहितको टोली खटिएको १ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विराटनगरका प्रवक्ता डिएसपी सिद्धराज न्यौपानेले जानकारी दिए ।
हत्या प्रकरण रहस्यमय बनिरहेका बेला प्रहरीले केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो सीआईबीका एसपी उमाप्रसाद चतुर्वेदीको नेतृत्वमा अनुसन्धान सुरु भएको छ । ससुरा–ज्वाँई दुई परिवारका नौ जनाको विभत्स हत्या गरिएको घटना दुबैको वंश नास गर्ने योजनाबाट प्रेरित भएको प्रहरीले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। त्यहिँ आधारमा प्रहरीले घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु गरेको पाँचथरस्थित सुरक्षा स्रोतले जानकारी दिएको छ।
ह्यासटग नो ब्रा अर्थात् ‘ब्रा चाहिँदैन’
समय–समयमा महिलाले के लगाउने, के नलगाउने भन्ने कुरा पुरुषसोचबाट निर्धारण हुनुहुँदैन भन्दै विरोधको आवाज उठ्ने...
कुमदेखि नै हातको नक्सासमेत नभएकी सम्झना राई...
कता जादैछन्, नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) ?
पार्टीभित्रै वार्ताको लागि दबाब झेलिरहेका विप्लव अबको...
‘ड्रिप्रेसन भनेको पागलपन होइन, लुकाएर नबसौँ’
मानिसको जीवन एउटा विचित्रको यात्राजस्तो छ ।...
१. रुपन्देहीमा गोली प्रहार गरी एकको हत्या
२. नारायणी नदीमा दसैँ अघि क्रुजको परीक्षण
३. मन्त्री योगेश भट्टराईलाई गालीगलौज गर्ने ज्ञानेन्द्र शाही प्रहरी नियन्त्रणमा
४. सुनको मूल्य निरन्तर घट्दै
५. नेपालगञ्ज एअरपोर्ट घटनाको राजनीतिक सार
६. दरबारबाट ‘गायब’ भयो सुनको ट्वाइलेट
७. सोह्र श्राद्धका लागि मुक्तिनाथमा चहलपहल
८. राजनीतिक स्थिरताबिना देश निर्माण हुन नसक्ने : मुख्यमन्त्री राई
९. सुपर पावर बन्नका लागि विआरआई आएको होइन : प्रचण्ड